Otu esi emepụta ozi na mmeghachi omume na Telegram | Gam akporosis
O meela ogologo oge kemgbe m gosiri gị nkuzi vidio bara uru akọwapụtara site na nkwụsị site na otu, otu mepụta ozi na bọtịnụ na Telegram a ga - eji ya site na ngwa izipu otutu ozi ozugbo. Ihe nkuzi vidio n'agbanyeghị na ọ dị mfe maka ọtụtụ ndị ọrụ, site na ịchọrọ ụfọdụ usoro ịgbaso usoro syntax, ọtụtụ ndị na-eso Androidsis agwala m okwu site na netwọkụ mmekọrịta dị iche na site na nke ha Androidsis Community na Telegram, nke dị mgbagwoju anya ma sie ike maka ọtụtụ ndị mmadụ ịghọta karịa ka m chere na mbụ.
Ọ bụ ya mere m ji kpebie ịmepụta vidiyo vidiyo ọhụrụ a dị ka vidiyo kwụ ọtọ, iji chọta ihe ngwọta dị irè maka onye ọ bụla chọrọ ma ọ bụ mkpa mepụta ụdị mmeghachi omume o ozi na bọtịnụ ndị ahụ mara mma na obi iru ala nke m na-akuziri gi otu esi eji ya. A dị mfe iji bot kwesịrị ekwesị maka ndị niile na-ege ntị n'agbanyeghị agbanyeghị nka mmụta ha ma ọ bụ afọ.
The bot na ajụjụ bụ bot na-aza aha nke ngwa ngwa, bot nke ị nwere ike ịchọ na Telegram naanị site na itinye njin ọchụchọ @IGIHE ma ọ bụ ghara nke ahụ, banye na ya naanị site na ịpị njikọ a.
Ozugbo bot malitere, iji mepụta ozi mbụ anyị na bọtịnụ, Ọ ga-ezu iji zipu onyonyo, GIF, ihennyapade ma ọ bụ vidiyo na nkata nke bot ahụ maka oge na-aga, ozi site na ozi, na-ezipụ bọtịnụ ahụ ka ọ bụrụ akara ngosi mmeghachi omume ma ọ bụ bọtịnụ iji jikọta njikọ ahụ na weebụsaịtị dị iche iche ma ọ bụ ọwa Telegram na otu.
Na vidiyo kwụ ọtọ nke m hapụrụ gị n'aka nri na mbido akwụkwọ a, ana m akọwa usoro nke usoro ị ga - agbaso iji bot a n'ụzọ ziri ezi, site na mmalite ma ọ bụ mmalite ya na ịmepụta ozi dị iche iche na mmeghachi omume na bọtịnụ. Ya mere, m na-akwado ka ị lee anya ka ị hụ otu ọ dị mfe ịmepụta ozi na bọtịnụ iji jiri kọntaktị Telegram gị, kọntaktị, otu na ọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu esi emepụta ozi na mmeghachi omume na Telegram. (Ozi na bọtịnụ)
Francis nke Assisi dijo
Daalụ. Nwere ike ịgwa m otu esi ehichapụ ma ọ bụ dezie bọtịnụ ahụ? Daalụ
Zaghachi Francisco de Asis
Etu esi anwale betas nke ngwa Microsoft adịghị na Storelọ Ahịa Play